जापानी नागरिक ‘ओकेबाजे’ को अभिनन्दन, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बेझाड । लामो समयदेखि पाल्पालाइ कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका जापानका काजुमासा काकिमी (ओकेबाजे)लाई तानसेनमा नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ ।
उन्ले चार वर्षअघि नै नेपालका लागि आवासीय प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेका छन् । बाजेले पाल्पामा रहेर सेवा गरेको साढे दुई दशक भएको उपलक्ष्यमा सम्मान गरिएको अभिनन्दन समितिका सदस्य लेखनाथ शर्मा मरासिनीले जानकारी दिए । उनको यसअघि दुईचोटि अभिनन्दन गरिसकिएको छ । पाल्पाका ग्रामीण बस्तीमा निरन्तर सामाजिक सेवामा बिताएको योगदानको कदरस्वरुप पाल्पालीले अभिनन्दन गरेका हुन् । कार्यक्रममा जापानका ७० भन्दा बढी नागरिकको सहभागिता थियो ।
नेपाल घुम्न आउनुभएका ओकेबाजे २५ वर्षअगाडि पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका–२ जल्पाको ढोलीमारामा बास बस्न पुगे । त्यहाँ बसोबास गर्ने बालबालिकाको दयनीय अवस्था, अशिक्षा, गरीबी देखेपछि उनको मनले यहीँ बसेर सेवा गर्ने सोच राखेर त्यस समयदेखि नै उनले पाल्पालाई कमर्थलो बनाएर काम गर्न थाले । “ गरीब, विपन्नलाई सहयोग गर्न पाउँदा मलाई निकै खुशी लाग्छ, समाजसेवामा अझै खटिरहन्छ,” उनले भने ।
आर्थिक समस्याले विद्यालयसम्म पुग्न नसकेका बालबालिकालाई शिक्षा दिने, औषधि उपचार, विकास निर्माण, खानेपानी, शैक्षिक भवन निर्माण, अक्षयकोष, पुस्तकालय स्थापना, आयमूलक काम, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरे ।
उनको करीब दुईसय विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग गरेका छन्। जापानका विभिन्न व्यक्ति, सङ्घसंस्थाबाट रकम जुटाएर गरीब, असहाय, दलित परिवारको शिक्षा, औषधि उपचार, भवन निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्र सहयोग पु¥याएका छन् ।
सन् १९३९ मा जापानको टोकियोमा जन्मनुभएका ओकेबाजेले त्यहाँको एक बासिदा विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका थिए। उनले २३ वर्षसम्म टोकियोमै अध्यापन गरेर अवकाश पाएपछि पाल्पामा रहेर सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका हुन । उनले आफ्नो पेन्सन जति सबै गरीब, विपन्न परिवारको लालनपालन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा खर्चंदै आएका छन्।
कार्यक्रमका अवसरमा जापानी र नेपाली संस्कृति प्रदर्शन गरिएको थियो । ओकेबाजे गरीब, दुःखी, विपन्न, असहाय वर्गको सहारा बनेका छन्। उनले यहाँका निम्न, दलित, विपन्नवर्गका परिवारमा अभिभावकको जिम्मेवारी निभाएका छन्। शुरुमा नेपाली भाषा नबुझेपछि नागरिकले जे सोधे पनि ‘ओके–ओके’ भनेर जवाफ फर्काउने गर्दा पाल्पालीले उनको नाम नै ओकेबाजे राखिदिएका हुन् । ओकजेबाजे अहिले नेपाली भाषा मज्जाले बोल्छन् ।